Monday January 04, 2016 - 10:09:43 in Xiriirka Kubadda Kolayga by Nocsom Editor
Xiriirka Soomaaliyed ee kubada koleyga ayaa magaalada muqdisho ka furay tababar ay ka qayb galayaan macalimiinta kubadda koleyga, waxaana xafladda furitaanka kasoo qayb galay masuuliyiin Ka socotay Guddiga Olombikada Soomaaliyeed , Madaxda Xiriirka
Tababarkan oo ka furmay xarunta Gos waxaa ugu Horeynka hadlay Guddoomiyaha XSKK Cabdullaahi Nuur Maxamed Cadaani Waxuuna sheegay in tababarkan ay ka qayb qaadanayaan macalimiin laga soo xulay cayaartooyda cuslaatay , kuwa hada xirafada kuguda jira iyo Ardayda Jaamacaha wax ka barata isla markaanauu bixinayo Macalin Cumar Cabduqaadir Baarajab .
Guddoomiye Cadaani ayaa intaa ku daray in tababarka loogu diyaar garoobayo tababar heerka koowaad ah oo sanadkan gudahiias xirirka qaban doono isla markaana ay kasoo qayb qaadan doonaan macalimiin ka socota gobolada dalka, Waxuuna Mahad celin balaaran u soo jeediyay Macalin Baarajab isagoo macalimiintakula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaanMacalinka maadaama uu tababrka afkii hooyo lagu bixinayo taasna ay guul tahay.
Macalin Baarajab ooxaflada ka hadlay ayaa sheegay in dalka uu xaq ku leeyahay talaabo kasta lagu horumarinayo kubada koleyga soomaliyeedna uu diyaar u yahay in uuka qayb qaato.
Guddoomiyaha Gos Cabdulaahi Axmed Tarabi oo xaflada ka hadlay ayaa sheegay in barisamaadki aykubabdda koleyga ku hormartayisku xirnaan wadatashi iyo kala faa'iidaysasho ka dhexaysay macalimiinta garsoorka iyo cayaartoodya taasna loo baahan yahay in dib loo soo celiyo , macaliinta tababarka qaadanayo laga doonayo in ay gartaan in masuuliyad culus ay saaran tahay.
Guddoomiye Tarabi ayaa dhanka kale amaan usoo jeediyay Madaxda Xiriirka oo waqti geliyay horumarinta kubadda koleyga qaybaheeda kale gedisan iyo Macalin Baarajab oogo'aansaday in aqoontiisa dalka dib uu soo celiyo.
Ugu dambeyn waxaa xaflada ka hadlay oo tababarka furay Guddoomiye sharafeedka Gos Cabduqaadir Ibraahin acan Abkoow waxuuna si qooto dheer uga sheekeeyay taariikhdii ay soo martay kubadda koleyga iyo qabkii ay ku hormartay waxuuna xiriirkakula dardaamay inay soo celiyaan taariikhdii wacnayd ee kubadda koleyga ku lahayd qaaradda afrika.